Забур 85 CARS - Nnwom 85 AKCB
1Wo Awurade, wodom wʼasase;
wode Yakob ahonyade san maa no.
2Wode wo nkurɔfo bɔne kyɛɛ wɔn
na wokataa wɔn nnebɔne nyinaa so.
3Wode wʼabufuw nyinaa too nkyɛn
na wodan fii wʼabufuwhyew ho.
4San gye yɛn bio, Onyankopɔn, yɛn Gyefo,
na ma wʼani nnye yɛn ho.
5Wo bo befuw yɛn akosi daa ana?
Wʼabufuw bɛtoa so akɔ awo ntoantoaso nyinaa so ana?
6Worenhyɛ yɛn den bio,
na ama wo nkurɔfo asɛpɛw wɔn ho wɔ wo mu ana?
7Awurade, kyerɛ yɛn wo dɔ a ɛnsa da no,
na ma yɛn wo nkwagye no.
8Metie nea Awurade Nyankopɔn bɛka;
ɔde asomdwoe hyɛ ne nkurɔfo, ahotefo no bɔ,
enti ɛnsɛ sɛ wɔsan kɔ agyimisɛm ho.
9Ampa ara, ne nkwagye bɛn wɔn a wosuro no,
na nʼanuonyam bɛtena yɛn asase so.
10Ɔdɔ ne nokwaredi behyia,
na trenee ne asomdwoe befew wɔn ho wɔn ho ano.
11Nokwaredi bepue afi asase no so,
na trenee ahwɛ afi ɔsoro.
12Awurade bɛma yɛn nea eye ampa ara
na yɛn asase bɛma ne nnɔbae.
13Trenee di nʼanim
siesie ɔkwan ma nʼanammɔntu.
AKCB : Nnwom 85